Brezila: Niely Nanerana Ny Firenena Ny Diaben’ny Janga · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2012 11:02 GMT
Ny 26 sy 27 Mey, tanàn-dehibe maro manerana an'i Brezila no nahitana ny fiodinana faharoan'ny hetsi-panoherana amin'ny fantatra ho SlutWalks [na diaben'ny janga].
Nidina an-dalamben'i Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza ary Belém – ankoatra ny tanàna maro hafa miantso ny fahafahan'ny vehivavy sy ny zon'ny vehivavy hiakanjo araka izay tiany tsy iharan'ny herisetra na maoraly, ny vehivavy anarivony, sy ny lehilahy mpitia vehivavy, pelaka, sarimbavy eny fa na dia ny mpikambana amin'ny vondron'ny mpitondra bisikileta, mpilalao skate, skinheads, punks ary ny anarsista aza – ho fanoherana ny fankahalana ny homo sy ho fiarovana ny feminisma, na ho fiarovana ny fitoviana.
Manu Baren, avy amin'ny bilaogy Jezebel, maneho hevitra [pt] amin'izay hitany nandritra ny fandrakofana ny Diabe:
Fanajana ny Janga avy amin'ny mpanao sariitatra Carlos Latuff. Under CC licence
[…] Tao amin'ny fotoana no nahitako tolo-kevitra matotra sy natao am-pisainana, manana tanjona hanaitra ny olona ho fanoherana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Amin'ny lafiny rehetra: hatramin'ny vatana ka mandalo amin'ny fananahana sy ny maoraly. Nanohina ahy ny herimpon'ny tanora, reny ary vaviantitra milaza amin'ny vhoaka ny tantaran'ny fihoara-pahefana, izay mety mahatonga hatrany amin'ny fahafatesana amin'ny lafiny sasany.
Niainga tany Canada ny Diaben'ny Janga, raha nanao fihetsiketseham-panoherana ny fanambaran'ny manamboninahitra ao amin'ny polisy Michael Sanguinetti noho ny fisiana tranga-na fanaovana an-keriny tao an-tanàna ka nilazany fa tsy tokony hiakanjo tahaka ny janga ny vehivavy raha tsy te-ho voaolana, ny vehivavy an'arivony tao Toronto tamin'ny 3 Avrily 2011.
Hatramin'io fotona io, maro ny hetsi-panoherana nanerana ny tany ahitana vehivavy manao akanjo fohy na mitanjaka tapany aza ka ijoroany fa tsy midika izany ary tsy manome alalana ny hanolanana na anaovana fihoara-pahefana.
Ho fandraisana ohatra ny tamin'ny herintaona, nifantina andian-tsary avy amin'ny fihetsiketsehana isan-karazany tany an-tanàna Breziliana ny Global Voices. Mihoatra ny telo arivo ny isan'ny nanatrika ny fotoana tany Brasilia, renivohitr'i Brezila, mihoatra ny arivo tany São Paulo, ary an-jatony tany an-tanàna maro hafa.
Tao São Paulo nandrakotra lalana 3 kilometatra ny diabe, ka nandalo ny lalana malazan'i Rua Augusta, toera-pihaonan'ny vondron'olona hafa sy toerana ahitana tranon-dopy maro sy trano fampisehoana zavakanto maro.
Diaben'ny janga São Paulo 2012. Saripîka Renato Batata copyright Demotix (26/05/2012)
mpanao fihetsiketsehana manandratra sora-baventy miteny hoe "Fahafahana sy fitoviana". Saripika Renato Batata copyright Demotix (26/05/2012)
"Tsy avy any amin'ny taola-tehezanao aho, ianao no avy tao amin'ny tranon-jazako". Saripika Renato Batata copyright Demotix (26/05/2012)
"Rehefa lehibe aho , te-ho izay tiako ho izaho". Saripika Cecília Santos, nahazoana alalana
Lahatsary roa ahitana ny fihetsiketsehana tao São Paulo: ny voalohany avy amin'i Manu Barem sy Thiago Guimarães miaty sombin-kabary teo am-panombohan'ny Diabe sy ny Diabe ary ny hiaka nataon'ny mpanao fihetsiketsehana:
Tao Rio de Janeiro, tao Copacabana no notontosaina ny hetsika ary an-jatony ny nanatrika.
baoritra eo ampanombohan'ny diabe. Saripika Camila Prott, nahazoana alalana
"Aza mampianatra anay hampiakanjo, ampianaro ny lehilahy tsy hanao an-keriny". Saripika Camila Prott, nahazoana alalana
Lahatsay Youtube avy amin'ny mpisera vecosi nandritra ny Diabe tao Rio de Janeiro:
Nidina tao an-dalamben'i Belo Horizonte ihany koa ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 26 Mey.
Andian'olona mandeha. Saripika Pedro Rennó, nahazoana alalana
Vehivavy afaka, vatana afaka. Saripika Pedro Rennó, nahazoana alalana
Tsy vitsy ny kilonga nandritra ny fihetsiketsehana. Saripika Camila Xavier, nahazoana alalana
Mpisera Youtube raquelpinheirocintra nandrakitra ity lahatsarin'ny Diabe tao Belo Horizonte ity:
Tao Brasília nandalo ny foibem-pahefana Breziliana indrindra ny Diabe.
"Afaka daholo isika". Saripika Lívia Mota, nahazoana alalana
Vahoaka nanao diabe namakivaky an'i Brasilia. Saripika momba ny SlutWalk Brasilia, ampiasaina malalaka.
Maro koa ny lehilahy nanatrika. Saripika Rogério Tomaz Jr, nahazoana alalana
Maro koa ny sary avy amin'ny Diaben'ny Janga tao Brasilia ao amin'ny momba azy ofisialy ao amin'ny Facebook. nandrakitra andian-dahatsary momba ny Diabe ny mpisera Youtube kyaya1 : ity ny fizarana faha-4.
Vitsy saingy mavitrika kosa no nisy tao Belém tamin'ny 27 Mey.
Vitsy eo amin'ny isa, saingy mavitrika. Saripika Marjorie Begot, nahazoana alalana
"Ahy aho, ahy irery, tsy an'izay rehetra mila". Saripika Marjorie Begot, nahazoana alalana
Misy koa ny sary hafa momba ny Diaben'ny Janga tao Belém hita ao amin'ny momba azy Ofisialy ao amin'ny Facebook sy ny lahatsary avy amin'ny mpisera Youtube Zemafarias.
Nisy hetsi-panoherana ihany koa tany Fortaleza, São Luis ary Vitória.
"Mandeha anilan'ny firehidrehitry ny lehilahy, mamakivaky koa ny feminisma". Diaben'ny Janga ao Vitória. Saripika Adrielley Caliman, nahazoana alalana
Maro ny ankizy tany Fortaleza. Saripika Jaci Marques, nahazoana alalana
"Vatatenany io, omeny amin izay tiany anolorana azy". Hetsika tany São Luis. Saripika Anel collective, ampiasaina malalaka.
Mpisera Youtube naainai nandrakitra lahatsary fohy nandritra ny Diabe tao Vitória.
Tao Recife, mihoatra ny 1100 ny olona nidina an-dalambe.
"Te-hifaly fotsiny aho, handeha malalaka amin ny akanjo tiako, ary hatoky, fa na miakanjo burka aho na hanao pataloha manaitra, hanaja ahy ny rehetra". Sora-baventy misy tononkira ventesin ny mpanao fihetsiketsehana manerana ny firenena. Saripika Vinicius Sobreira, alalana CC licence
Misy ny sary maro hafa momba ny diabe azo jerena [pt] ao amin'ny Literatura clandestina sy ao amin'ny Vondrona Facebook-n'ny Diabe. Nandrakitra ny lahatsarin'ny Diabe tao Recife ny bilaogera Lúcio Mustafá. Misy sary betsaka kokoa ao amin'ny Flickr amin'ny kaontin'i Leo Cisneiros.
Nisy koa ny diabe tao Florianópolis.
Mpanao fihetsiketsehana mivory hanao diabe. Saripika Rodrigo Botarro, nahazoana alalana
"Ahy ny hetahetako". Saripika Yuri Brah, nahazoana alalana
"Tia ny Janga i Jesoa". Nandalo ny tempolin ny Fiangonana Oniversaly ny hetsika, fivavahana evanjelika mpandala ny nentin-drazana. Saripika Yuri Brah, nahazoana alalana
Farany, ny alahady 27 nataon'ny diaben'ny Janga tao Porto Alegre.
"Tsy manana antony ny fanaovana an-keriny". Photo by Pablo Capilé, free use
Saripika Fora do Eixo Collective, alalana CC licence
"Ny lehilahy tsy miakanjo dia a) mafana sa b) miangavy aolana, mazava loatra. Tsy tahaka ny adaladala ve raha amin ny fomba (fijery) hafa?". Saripika Rodrigo Cardia, nahazoana alalana
Nandrakitra lahatsarin'ny fanambarana novakiana São José dos Campos tao amin'ny faritanin'i São Paulo ny mpisera Youtube ElbaOliveira1 sy mayluka09, tahaka izay nataon'i lalgarra tany Sorocaba izay misy sary azo jerena ao amin'ny vondrona Facebook-n'ny Diabe. Ny Foque Collective nandrakitra lahatsary iray nandritra ny Diabe tao Natal ary i avmandrade nandrakitra ny Diabe tany Salvador.